राती १२ बजेको ताजा अपडेट : महानगर कोर एरियाकाे मतगणना यस्तो आयो ! - jagritikhabar.com
राती १२ बजेको ताजा अपडेट : महानगर कोर एरियाकाे मतगणना यस्तो आयो !
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका स्वतन्त्र उमेदवार बालेन शाहले २४,८९० मत पाएका छन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका केशव स्थापितले १३,१९८ र कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले १२,२७२ मत पाएकी छन् ।
बालेन स्थापितभन्दा ११,५९६ मतले अगाडि छन् । पछिल्लो विवरणअनुसार काठमाडौंमा ६४,५७९ मतगणना भएको छ । अहिलेसम्म काठमाडौंका ५ वडाको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ । १ देखि ५ वडासम्मको गणना सकिँदा सबै वडामा बालेनको फराकिलो अग्रता छ ।
अहिले गणना भइरहेका वडाहरु ६, ७, ८, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ३२ हुन् । यीमध्ये वडा नम्बर ८ मा सिर्जना सिंह र वडा नम्बर २७ मा केशव स्थापित अगाडि छन् । वडा नम्बर २७ काठमाडौंको कोर एरियाभित्र पर्छ ।
भेटिएको मतपेटिकामा पनि बराबरी मत
बराबरी मत भएपछि महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका–८ को वडाध्यक्ष विजेताको घोषणा गोलाबाट गरिएको छ । जसमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार शम्शेरसिं लामा विजयी भएका छन् । जेठ १ गते नै वडाको मतगणना सम्पन्न भएर लामा विजयी भएको घोषणा निर्वाचन आयोगले गरेको थियो ।
लामा र किङरिङ दुबैले ७ सय ६६ मत ल्याए। त्यसपछि वडाध्यक्ष विजयी घोषणा गर्न गोला तान्न लगाएको थियो । किङमिङले गोला तान्दा नपरेपछि लामा पुनः विजयी भएको घोषणा गरिएको थियो।
उता, कैलालीको भजनी नगरपालिकामा रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वियजी भएको छ । नगरपालिकाको मेयरमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्‍मेदवार केवल चौधरी निर्वाचित भएका छन् ।
उनले निकटतम प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका शेरबहादुर चौधरीलाई ३ हजार बढी मतान्तरले हराउँदै निर्वाचित भएका हुन् ।केवलले ८ हजार ९६६ मत ल्याउँदा माओवादी केन्द्रका शेरबहादुरले ५ हजार १९८ मत मात्र पाए ।
यस्तै नेकपा एमालेका हर्कबहादुर बुढाले ३ हजार २६२, जनता समाजवादीका लक्ष्मीराम चौधरीले १ हजार ४६५ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राज कुमार चौधरीले ५८८ मत ल्याए ।
यस्तै नगरपालिकाको उपमेयरमा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका राजु तिरुवा निर्वाचित भएकी छन् । तिरुवाले निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका गोकेन्द्र भण्डारीलाई ३ हजार बढी मतले हराउँदै निर्वाचित भएका हुन् । तिरुवाले ७ हजार ६२२ मत ल्याउँदा कांग्रेसका भण्डारीले ४ हजार ४९० मत मात्र पाए ।
यस्तै एमालेका तुलसी चौधरीले ३ हजार १६३, जनता समाजवादीकी कमला ढुंगानाले १ हजार ५७९ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी शारदा शाह मल्लले ९४८ मत ल्याइन् ।